NFT (Fungible Tokens) - DeFi + ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးရေး Linux မှ
NFT (Fungible Tokens) - DeFi + ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Linux Post Install လုပ်ပါ | | GNU / Linux များ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးသည်fromရိယာမှဖြစ်သည် DeFi (ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောဘဏ္Financeာရေး)ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဘဏ္financialာရေးဂေဟစနစ် Cryptocurrencies မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှနေ့စဉ်ပိုမိုအားဖြည့်လာသည့်ဘဏ္worldာရေးကမ္ဘာပေါ်ရှိမကြာမီက Blockchain Technology ၏ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ "NFT (Fungible Tokens)" o "Non-Fungible တိုကင်".
အ "NFTs" သား တိုကင် များသောအားဖြင့်ဒြပ်ထုမဟုတ်သောပစ္စည်းများ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အဖြစ်အသုံးပြုသောလုပ်ကွက်များ (Blockchain) ၏ ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု ငါမည်သူမဆိုသတ်မှတ်တယ် ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့ကိုအမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည် စမတ်စာချုပ် ကနေ software ကိုနှင့်အတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏ open source ဖြစ်ပြီး တစ် ဦး သေချာစေရန် ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု။
1.1 Blockchain တစ်ခု၏နိမိတ်များကားအဘယ်နည်း။
1.2 Smart Blockchain ကန်ထရိုက်များကဘာတွေလဲ။
2 NFT (Fungible Tokens) - ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့်ချုပ်ဆိုထားသောစမတ်စာချုပ်များ
2.1 NFTs (Non-Fungible Tokens) ဆိုတာဘာလဲ။
2.2 အဘယ်ကြောင့် NFTs သည်ယခုလူကြိုက်များသနည်း။
"Blockchain အတွင်းတွင်တိုကင်များကိုများသောအားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်တန်ဖိုးတစ်ခုယူနစ်ကိုကိုယ်စားပြုသော cryptographic token အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ များစွာသောအရာများထဲတွင်တိုကင်သည်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုပေးအပ်ရန်၊ လုပ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်ကွပ်မျက်ရန်အတွက်လုပ်ခပေးရန်၊ ဒေတာများကိုလွှဲပြောင်းရန်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများသို့မက်လုံးပေးရန်သို့မဟုတ်တံခါးပေါက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Cryptoasset ကိုပုံမှန်အားဖြင့် blockchain platform တစ်ခုအတွင်း၌ထုတ်ပေးပြီးရောင်းဝယ်သောအထူးအမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်မတူကွဲပြားသောတည်ဆဲတိုကင်တစ်ခုစီ (cryptocurrencies၊ smart contract များ၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များအစရှိသဖြင့်) ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ပြင် cryptography ကိုအသုံးပြုသောအခြားကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။" Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် Cryptocurrencies: သူတို့ကိုအသုံးမပြုခင်ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ။
Smart Blockchain ကန်ထရိုက်များကဘာတွေလဲ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အဆိုအရ Bit2Me အကယ်ဒမီ၊ အ စမတ်စာချုပ်များ အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်
"Blockchain တွင်သိမ်းဆည်းထားသောအထူးညွှန်ကြားချက်အမျိုးအစား။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်ပရိုဂရမ်ရှိပြီးသား parameter များအရကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤအရာအားလုံးကိုမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများ၊ ၎င်းတို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုရိုးရှင်းစေရန်နှင့်စားသုံးသူအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်ကြားခံများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
၎င်းကိုအချို့သောပရိုဂရမ်ဘာသာစကားများဖြင့်ရေးသားထားသော scripts (ကွန်ပျူတာကုဒ်များ) မှပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များသည်၎င်းကိုဖွဲ့စည်းထားသောကုဒ်ထဲတွင်စာကြောင်းများနှင့်ပညတ်ချက်များသာဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်အာဏာပိုင်များအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိဘဲတရားဝင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ open source သဘောသဘာဝကြောင့်ဖြစ်သော၊ လူတိုင်းမြင်နိုင်ပြီး blockchain နည်းပညာတွင်ရှိခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ ဤအရာသည်၎င်းအားဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း၊" Smart Contracts: သူတို့ကဘာတွေလဲ၊ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ ဘာတွေထည့်ဝင်သလဲ။
NFT (Fungible Tokens) - ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့်ချုပ်ဆိုထားသောစမတ်စာချုပ်များ
NFTs (Non-Fungible Tokens) ဆိုတာဘာလဲ။
သို့သော်တူညီသောအယူအဆနှင့်အတိုင်းအတာကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖော်ထုတ်ထားသောအယူအဆကိုကိုးကားမည် "NFTs" ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ Binance အကယ်ဒမီအောက်ပါဖော်ပြချက်ကဆိုသည်
"non-fungible token (NFT) သည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုတည်းကိုကိုယ်စားပြုသော blockchain ပေါ်တွင် cryptographic token အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားအပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာပိုင်ဆိုင်မှုလက္ခဏာသက်သေဗားရှင်းဖြစ်နိုင်သည်။ NFT များသည်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖလှယ်။ မရသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်နယ်ပယ်အတွင်းစစ်မှန်ကြောင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသက်သေပြနိုင်ကြသည်။
Fungibility ဆိုသည်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏တစ်ခုချင်းစီကိုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်လဲလှယ်ခြင်းနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအနေဖြင့်ခွဲခြား။ မရသောအရာများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည်ငွေကြေးအမျိုးအစားများကိုဖောင်းပွစေနိုင်သည်။ Crypto Collectibles နှင့် Fungible Non Tokens (NFTs) ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်။
အဘယ်ကြောင့် NFTs သည်ယခုလူကြိုက်များသနည်း။
ကတည်းက "NFTs" သူတို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်လဲလှယ်လို့မရပါ၊ အဘယ်သူမျှမတူကြသောကြောင့်၎င်းတို့သည်မကြာသေးမီကကဲ့သို့ကျော်ကြားလာခဲ့သည် စျေးကွက်နှင့် / သို့မဟုတ်စုဆောင်းနိုင်သောဒစ်ဂျစ်တယ်တူရိယာ။ ဒါကဒီဂျစ်တယ်အနုပညာလက်ရာတွေနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တခြားအရာဝတ္ထုတွေကိုရောင်းချဖို့သူတို့ကိုလူကြိုက်များစေခဲ့တယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်၏ဤလည်းဖြစ်ကြသည် မရဆိုလိုသည်မှာမူရင်းတစ်ခုသာရှိပြီးတစ်ခုတည်းသောပလက်ဖောင်းတွင်အသုံးပြုမှုနှစ်ခုမရှိနိုင်ပါ ခွဲလို့မရဘူး cryptocurrencies နှင့်မတူဘဲ, သူတို့သည်ဖြစ်ကြသည် မပျက်စီးနိုင်သောနှင့်စစ်ဆေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာလုပ်ကွက်တွေကွင်းဆက်တစ်ခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့ပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကိုပြtheနာ "NFTs" အခြားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှကျယ်ပြန့်သည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆက်စပ်သော Defy။ ထို့ကြောင့်၎င်းအကြောင်းအရာကိုအထူးရင်းမြစ်များဖြင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်ကောင်းသည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အကြောင်း «NFT (Non-Fungible Tokens)»သို့မဟုတ်စပိန်ဘာသာဖြင့်ပြန်ဆိုထားသောကြောင့်လူသိများသည်၊ Non-Fungible တိုကင်ဘာတွေလဲ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆက်စပ်သော Defyသူတို့ဟာလူကြိုက်များပြီးအသုံးဝင်လာကြတယ်။ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » NFT (Fungible Tokens) - DeFi + ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
FOS-P2: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Facebook Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
Github ရှိ Exchange xploit မှကုဒ်ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ဝေဖန်မှုများကိုခံရသည်